Sichuan (四川) ခရီးစဉ် (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » Sichuan (四川) ခရီးစဉ် (၁)
Sichuan (四川) ခရီးစဉ် (၁)
Posted by weiwei on May 2, 2011 in Photography, Travel | 22 comments
Sichuan ခရီးစဉ် (၁)
တိဗက်မှာ ၇ ရက်တာ လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ၈ ရက်မြောက်နေ့မှာ တိဗက်ပြည်နယ် လားဆားမြို့လေဆိပ်မှ မနက် ၉ နာရီခွဲလေယာဉ်နဲ့ စီချွမ်ပြည်နယ်မြို့တော် ချန်သူး (Chendu) ကို ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ စီချွမ်မှာ ၄ ညပဲ အချိန်ရလို့ ကျွန်မတို့ အဓိကသွားချင်တဲ့ (Jiuzhaigou) ကျိုကျိုက်ကုန်း နဲ့ giant Buddha ရှိတဲ့ (leshan) လဲ့ရှန်းကိုပဲ သွားဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ တိဗက်ကထွက်လာတော့ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ထဲပဲ စီချွမ်ကိုခရီးဆက်ခဲ့တယ်။ ခရီးသွားကုမ္ပဏီနဲ့ မဆက်ပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခရီးစဉ်ကို ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က စီချွမ်ငလျှင်ပြီးတာ ၂ လ ပဲ ရှိသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တော်တော်လေး ဆိုးနေသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ သွားတာသွားရတာ စိတ်ထဲကတော့ ခပ်လန့်လန့်ပါပဲ။
ချန်သူးလေဆိပ်ကို မွန်းလွဲ ၁ နာရီလောက်မှာရောက်ပါတယ်။ လေဆိပ်ကနေ တက်စီငှားပြီး ချန်သူးမြို့ထဲက အဝေးပြေးကားဂိတ်ရှိရာနေရာကို အရင်ဆုံးသွားလိုက်ကြပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ ကားနဲ့ ကျိုကျိုက်ကုန်းကို သွားဖို့ စုံစမ်းရင်းနဲ့ ကားလက်မှတ်နဲ့ တည်းခိုဖို့ ဟိုတယ်အတွက်ပါ စီစဉ်ရပါတယ်။ ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမယ်။ ချန်သူး-ကျိုကျိုက်ကုန်းကားလမ်းက ငလျှင်ဒဏ်အကြီးအကျယ်ထိခဲ့လို့ လမ်းပိတ်ထားတာကြာပြီ။ အဲဒီအပါတ်မှာမှ ခရီးသည်တင်အဝေးပြေးကား လမ်းစဖွင့်ပါတယ်။ တစ်နေ့လုံးမှာမှ မနက်ပိုင်းတစ်စီးပဲ ထွက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ၂ ယောက် သတ္တိတော်တော်ကောင်းလို့ သွားမယ်ဆုံးဖြတ်ပြီး နောက်တစ်နေ့ မနက်ထွက်မယ့် ကားလက်မှတ်ဝယ်လိုက်ကြတယ်။ တည်းခိုဖို့ ကားဂိတ်နဲ့နီးတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ဟိုတယ်မှာ ပစ္စည်းတွေထား ရေမိုးချိုးခဏအနားယူပြီး ချန်သူးမြို့ထဲက ပန်းခြံတစ်ခုနဲ့ ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းကို သွားလည်ကြပါတယ်။ Taojiao (တာဆိုအယူဝါဒ) ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တာကို သတိထားလိုက်မိတယ်။ တာအိုဘုန်းကြီးတွေလဲ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီဆိုတော့ ပန်းခြံထဲမှာ အပန်းဖြေအနားယူနေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေ အများကြီး တွေ့ခဲ့ရတယ်။ အလွန်ကျယ်ဝန်းပြီး သန့်ရှင်းခေတ်မှီတဲ့ ပန်းခြံကြီးတစ်ခုပါပဲ။ မြို့တိုင်းမှာ ၀င်ကြေးပေးစရာမလိုတဲ့ အပန်းဖြေပန်းခြံကြီးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေ၊ အကတိုက်နေကြတဲ့ အဘွားကြီးတွေ၊ ထိုက်ကျီချွမ်လေ့ကျင့်နေတဲ့သူတွေ၊ ပန်းချီဆွဲနေသူတွေ၊ ကလေးထိန်းနေတဲ့ အဘိုးအဘွားများကို အများဆုံးတွေ့ရပြီး လူလတ်ပိုင်းတော်တော်နဲတာကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။
ညနေစာကို စီချွမ်စားသောက်ဆိုင်မှာ စားတယ်။ ပူစပ်တယ်လို့ နံမည်ကြီးတဲ့ စီချွမ်အစားအစာအစစ်က အရင်တုန်းက စားဖူးတာတွေထက် အဆပေါင်းများစွာ ပူစပ်ပါတယ်။ ကျွန်မက အစပ်ကြောက်တဲ့သူဆိုတော့ ဘယ်လိုမှစားလို့မရအောင် စပ်တယ်။
ညနေစာစားပြီးတော့ ညလမ်းလျှောက်ဈေးလမ်း (buxingjie) (walking street) မှာ လမ်းလျှောက်ရင်း ပစ္စည်းတွေကို စပ်စုကြပါတယ်။ တခြားဒေသနဲ့ ဘယ်လိုကွာသလဲသိရအောင် စပ်စုကြတာ။ ၀ယ်ဖို့အစီအစဉ်တော့ မရှိပါဘူး။ တခြားရောက်ဖူးတဲ့ မြို့ကြီးတွေနဲ့ သိပ်မကွာဘူး။ အပြင်အဆင်၊ ဈေးနှုန်းနဲ့ တံဆိပ်တွေက အတူတူပါပဲ။
ငလျှင်ဒဏ်ထိခဲ့တဲ့ အဆောက်အဦးတွေနဲ့ စိုးရိမ်စရာရှိတဲ့အဆောက်အဦးတွေ အကုန်လုံးအမြန်ဖြိုပြီး အသစ်ပြန်ဆောက်နေကြပါတယ်။ မြို့ထဲမှာ ချောင်းတစ်ခုဖြတ်ပြီး စီးဆင်းနေတာကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ ချောင်းဘေးပတ်ပတ်လည်ကနေ လမ်းလျှောက်လို့ရအောင် အရိပ်ရသစ်ပင်များ၊ အနားယူစရာ ခုံတန်းလျားများ၊ ညဘက်မှာ မီးဆိုင်းများနဲ့ သာသာယာယာရှိလှပါတယ်။ တခြားမြို့များထက် အနဲငယ်ပိုထူးခြားတာတစ်ခုက တရုတ်လူကြီးတွေ ချောင်းဘေးလမ်းတစ်လျှောက် အရိပ်ကောင်းကောင်းနေရာတွေမှာ လူစုကြပြီး ဖဲကစားခြင်းနဲ့ မာကျောက်ကစားခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ညမိုးချုပ်မှ ဟိုတယ်ကိုပြန်ပြီး ကျိုကျိုက်ကုန်း ခရီးစဉ်အတွက် လိုအပ်သလောက်အ၀တ်အစားအသုံးအဆောင်တွေပြင်ဆင်ပြီး အနားယူလိုက်ကြတယ်။
ဘုရားကျောင်း၊ ပန်းခြံနဲ့ ညဘက်ပုံတွေကို သီးခြားပို့စ်နဲ့ ထပ်တင်ပေးပါ့မယ် … ဒီထဲမှာ တစ်ခါထဲထည့်လိုက်ရင် များသွားမှာစိုးလို့ ….
ပန်းခြံတွေမှာ အမြဲတမ်း လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့ လူ အုပ်စုတွေ အမြဲ တွေ့ရတယ်နော်။
ဒီက ပြည်ကြီး မပြန် တရုတ်တွေလည်း မနက်မနက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ကြတယ်။
အဲဒီက အရှိန်တွေ ဖြစ်မှာပေါ့။
အသက်ကြီးတဲ့ လူတွေ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာ သိပ်ကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်ပါ။ လုပ်သင့်တယ်။
sichuang မဟုတ်ပါ sichuan လို့ ရေးရပါသည်
ဟုတ်ကဲ့ … ပြင်လိုက်ပါ့မယ် … မရေးတာကြာလို့ မှားရိုက်လိုက်မိတယ် …
လောလောဆယ်တော့..အလုပ်ကလူတချို့ တရုတ်ပြည်ဈေးဝယ်သွားနေလို့.. တိုက်တွန်းထားလိုက်တယ်..။
သဂျီး တရုတ်ပြည်က အပြန် သံလျင် ကိုလားမလား မော်မမြိုင်ကို လာမလား.. လာခဲ့.. လိုက်ပို့ပေးမယ်။
စပ်တယ်တာပြောတယ် … ကြည့် ရတာ အသားပေါင်းတွေလားပဲ… နောက်ပြီး ငရုပ်သီး အရောင်လဲ မပါဘူး … ငရုပ်သီး အစိမ်းလား……
စပ်တာက ငရုတ်သီးကြော်လိုမျိုးအနှစ်တွေက စပ်တာ … အဲဒီအနှစ်တွေကို ကျွန်မတို့ ဗမာပြည်က ငရုတ်ဆီစားသလိုမျိုး ဘာနဲ့မဆိုတို့စားတယ် … ဟင်းရည်ထဲမှာလဲ ထည့်သောက်တယ် … နောက်ပြီး လျှာကိုပူထူသွားတဲ့ စီချွမ်ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကလဲ အရမ်းပူတယ် … ဓါတ်ပုံထဲမှာ အကုန်စုံအောင် မမြင်ရလို့ပါ …
ကိုကြောင်ကြီးက အရမ်းတော်တာပဲနော် …
ဘာသာစကားတွေအများကြီး တတ်တယ်နော် …
谢谢你的支持 kiwi666! 我已经好久不用汉语了. 忘记了很多字.
嗨！ 大猫，（如何写在缅甸 ？）这不太看懂。您的意思是 如何写缅语 吗？那就先谢了。我有空就找您。
မဝေရေ တာအိုဘုရားကျောင်းက အကြီးအကဲရုပ်ထုဆိုတာ ဘာရုပ်လဲ။ နတ်ရုပ်လား။ ဘာဘာသာရဲ့ အယူအဆလဲ။ သိရင်ပြောပေးပါလား။
တရုတ်လို (道教) (သောက်ကျောက်) (Taolism) ..
သူ့နံမည်က လောင်းဇူ (Laozi) .. သူက အယူဝါဒတစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပဲ … ကွန်ဖြူးရှပ်နဲ့ ခေတ်ပြိုင်တစ်ယောက် .. ကွန်ဖြူးရှပ်ရဲ့ ဆရာလို့လဲ ပြောကြတယ် …
အခုအချိန်အထိ သူ့အယူဝါဒကို လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့ ဂိုဏ်းတစ်ချို့ရှိတယ် … ဥပမာ .. ၀ူတန်းဂိုဏ်း
တရုတ်အတွေးအခေါ်ပညာရှိ မဟုတ်လား။ ကြားဖူးတယ်။ အဲဒီပုံက Lao Zi ရဲ့ပုံပေါ့။ ဟုတ်လား။
အဲ့ဒီမှာ တရုတ် သိုင်းကားကလို ရိုးရာအကျီင်္တွေဝတ်ရင် ပိုမိုက်မယ်နော် …
အဲဒီက ဘုန်းကြီးတွေက ရိုးရာဝတ်စုံပဲ ၀တ်ကြတယ် … ဆံထုံးရယ် အကျီအဖြူရယ် တရုတ်သိုင်းကားထဲကလိုပဲ … သူတို့နဲ့တောင် စကားပြောဖြစ်ခဲ့သေးတယ် … စိတ်ထားကောင်းကြပြီး ဖော်ရွေကြပါတယ် … ဓါတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်ခဲ့လိုက်ဘူး ..